Mayday, Mayday dhammaan Senatarrada Maraykanka iyo Wakiilada Hawaii waxay u direen Ciidanka Badda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Mayday, Mayday dhammaan Senatarrada Maraykanka iyo Wakiilada Hawaii waxay u direen Ciidanka Badda
Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • News • Wararka Mareykanka
Ka dib markii 1,618 gallon oo shidaal jet JP-5 ah laga sii daayay dhuumaha gudaha Red Hill Shidaalka Kaydinta Shidaalka ee Oahu, Hawaii 6-dii Maajo, Ciidanka Badda ayaa markii hore u sheegay dadweynaha in aan wax shidaal ah lagu sii dayn deegaanka. Tani run may ahayn markii ay Ciidanka Badda ogaadeen inta uu le'eg yahay daadadku.
Iyadoo hoggaamiyeyaasha dunidu ay ku kulmayaan Glasgow, UK COP26 si ay uga wada hadlaan deegaanka iyo isbedelka cimilada, masiibada socota ee dalxiiska ku tiirsan ee Hawaii ayaa soo baxaysa oo noqonaysa arrin qaran oo weyn.
Bishii Jannaayo ee sanadkan, saraakiisha ciidamada badda waxay haysteen caddaymo ku filan oo lagu xaqiijinayo in dhuumaha ku xidhan nidaamka Kaydinta Shidaalka ee Red Hill ay shidaal ku daadanayso Pearl Harbor oo u dhow Hotel Pier. Si kastaba ha ahaatee, Waaxda Caafimaadka lama wargelin ilaa May, sida ku cad warqad DOH ah.
Tani waxay isu beddeshaa khatar weyn oo deegaanka Hawaii.
Shalay dhammaan 4-ta wakiil ee Mareykanka ah iyo Senatorada Gobolka Hawaii waxay warqadan u qoreen Waaxda Badda.
Kani waa qoraalkii asalka ahaa ee warqadda:
Mudane Carlos Del Toro
1000 Ciidanka Badda Pentagon
Xoghaye Del Toro,
Waxaan wax ku qornaa walaacyada sii kordhaya ee ku saabsan badbaadada hawlaha shidaalka ee Ciidanka Badda ee Hawaii. Waxaan si gaar ah uga walaacsanahay warbixinnada ku saabsan shidaal ka daatay agagaarka Hotel Pier ee Saldhigga Wadajirka ah ee Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) kaasoo dhacay Maarso 2020 iyo eedeymaha ah in Ciidanka Badda aysan si habboon uga soo bixin isha iyo miisaanka qulqulka shidaalka ee maamulayaasha gobolka, saraakiisha federaalka, iyo dadweynaha — oo ay ku jiraan xafiisyadeenna.
Ciidanka badda waxay sameeyeen ballan-qaad ah in ay ka qaybgalaan dadka Hawaii iyada oo loo marayo hoolalka magaalada iyo guddiyada xaafadaha, si ay u sheegaan maamulayaasha gobolka iyo saraakiisha, iyo in la ilaaliyo khadadka isgaarsiinta ee u furan wafdiga Koongareeska Hawaii ee ku saabsan waxa ay Ciidanka Badda sameynayaan si ay u sii ahaadaan maamulayaasha wanaagsan ee deegaanka. . Taasi waa sababta aan uga niyad jabnay in aan markii hore ka ogaanno shidaalka Hotel Pier ee saxafada halkii aan si toos ah uga maqli lahayn hoggaanka Navy.
Go'aanka ciidamada badda ee ah in aan si cad loo aqoonsan huteelka Pier shidaalka oo uu sharaxo waxa uu samaynayo si looga hortago in mustaqbalka uu dhaco waa mid aan waafaqsanayn ballanqaadkii xoghayayaashii hore ee ciidamada badda ay u sameeyeen dadka Hawaii si ay u noqdaan kuwo hufan dhammaan arrimaha saameyn kara deegaankeena. kheyraadka. Intaa waxaa dheer, waxay daba socotaa shidaal 6-dii May ku daatay Xarunta Kaydka Shidaalka ee Red Hill, taas oo markii hore Ciidanka Badda ay u sheegeen dadweynaha in aan wax shidaal ah lagu sii dayn deegaanka, bayaan aan ogaanay in aan sax ahayn markii ay ciidamadu ogaadeen heerka buuxa ee shidaalka. daatay. Dhacdooyinkan u dambeeyay, oo ay ku jiraan qaabka ay uga jawaabeen ciidamada badda iyo hufnaan la'aanta shacabka, ayaa keenaya su'aalo ku saabsan halista ay ciidamada badda ku qaadaan mas'uuliyadda ka saaran inay si cad ula xiriiraan dadweynaha arrimaha khuseeya caafimaadka iyo badbaadada. Dadka Hawai waxay si fiican uga mudan yihiin Ciidanka Badda.
Sida ay la xiriirto dhacdadii Hotel Pier, waxaan haynaa walaacyo gaar ah oo su'aal gelinaya sida Ciidanka Badda ay u shaqeeyaan oo ay u kormeeraan howlahooda shidaal ee Hawaii. Waxaan codsanaynaa jawaabo waafi ah oo ku habboon su'aalahan soo socda:
1) Nidaam noocee ah ayay saraakiisha ciidamada badda u isticmaaleen si ay u ogaadaan halka uu ka yimid iyo baaxadda Hotel Pier ee daadsan, habraacyadaasi miyay raaceen ilaalinta ciidamada badda iyo heerarka tijaabinta ee ay u dejiyeen si ay u wanaajiyaan badqabka hawlahooda shidaal si ay uga jawaabaan daadinta kale?
2) Ciidanka Badu miyay u hogaansameen dhamaan shuruudaha ka warbixinta siidaynta shidaalka ee la xidhiidha dhacdadan oo ma siiyeen macluumaad wakhtiyaysan xeeriyayaasha gobolka, oo ay ku jiraan macluumaadka laga yaabo inay khusayso sarkaalka dhagaysiga ogolaanshaha hawlgalinta Hill Hill?
3) Waa imisa tirada guud ee shidaalka lagu sii daayay Hotel Pier, maxayse ciidamada badda ka sameeyeen si ay u nadiifiyaan oo ay u hagaajiyaan aagga uu saameeyay?
4) Waa maxay caddaynta, haddii ay jirto, ma jiraan in saraakiisha Navy ay qariyeen macluumaadka ku saabsan daadinta Hotel Pier taas oo noqon lahayd wax ku saabsan tixgelinta Waaxda Caafimaadka ee Hawaii si loo cusbooneysiiyo oggolaanshaha hawlgalka Red Hill?
5) Waa maxay tallaabooyinka daba-galka ah ee ay Ciidanka Badu samaynayaan si ay u aqoonsadaan meelaha kale ee ka iman kara fashilka hawlahooda shidaalka, oo ay ku jiraan hababka dhuumaha ee JBPHH ama agagaarka, taas oo keeni karta daadinta shidaalka khatarta ah? iyo
6) Ka warran, haddii ay jiraan, xidhiidhka dhuumaha Hudheelka Pier uu la leeyahay Xarunta Kaydinta Shidaalka ee Red Hill iyo saamaynta ay tani ku yeelan karto qorshaha horumarinta xarunta ee hadda jira, oo ay ku jiraan kuwa looga baahan yahay maamulayaasha gobolka iyo federaalka?
Ciidanka badda waa in ay sii wadaan hagaajinta maamulka iyo kormeerka hawlahooda, oo ay siiyaan macluumaadka saxda ah ee waqtiga iyo maamulka gobolka iyo federaalka si loo hubiyo in hawlaheeda shidaalku aysan khatar ku ahayn caafimaadka iyo badbaadada dadka Hawaii. Si taas loo gaaro, waxaan fileynaa inaad jawaabo waafi ah oo ku haboon ka bixiso su'aalaha kor lagu soo sheegay, haddii wax khalad ah la ogaado, inaad ka dib qaadi doonto tillaabo ku habboon.
Waxaan si xushmad leh u codsanaynaa shir wafti heer-xubin ah oo lagaga wadahadlo sida ay Ciidanka Badda u shaqaynayaan una wadaan kormeerka hawlahooda shidaal ee Hawaii, oo ay ku jiraan tallaabooyinka ay qaadayso si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada bulshada, ugu dambayn Diseembar 3, 2021. Waad ku mahadsan tahay tixgelintaada codsigan. Waxaan rajaynaynaa inaan ka sii wada hadalno arrintan.
Waxaan rajaynaynaa inaan ka sii wada hadalno arrintan.
BRIAN SCHATZ, Senator Maraykan ah
ED CASE, Wakiilka Maraykanka
KAIALI'I KAHELE, Wakiilka Mareykanka